‘बढी उमेरका व्यक्तिलाई सङ्क्रमण हुँदा मृत्यु दर पनि बढी हुन्छ’ -डा. जोस भ्यानडिलिएर « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
‘बढी उमेरका व्यक्तिलाई सङ्क्रमण हुँदा मृत्यु दर पनि बढी हुन्छ’ -डा. जोस भ्यानडिलिएर
२०७७, १० भाद्र बुधबार ११:१२ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन(डब्लुएचओ)को नेपालस्थित कार्यालयका प्रतिनिधि डा जोस भ्यानडिलिएरले कोरोना भाइरसबाट बढी उमेरका व्यक्तिमा सङ्क्रमण बढेसँगै मृत्यु दर पनि बढ्ने बताउनुभएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा प्रेसित गरेको अन्तरवार्ता उहाँले अहिले नेपालमा देशैभरी धेरै कोरोनाका केसहरु देखिन थालेको र बढी उमेरमा मानिसमा थप वृद्धि हुने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्नुभयो । “केही महिना अघि विदेशबाट फर्किएकामा मात्र केस थियो । फर्किेनेहरुको सङ्ख्या घटेकाले केश पनि घटेको देखिएको थियो । तर, अहिले सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको छ । यो सुरुआत मात्रै हो । केसहरु निकै नै बढनेवाला छ । परिस्थिति अझै नराम्रो हुनेवाला छ”, उहाँले भन्नुभयो ।